Iindaba - Indlela yokusebenzisa ikhethini lomnyango wePVC ngokuchanekileyo kunye nokwandisa ubomi bayo benkonzo
1, musa ukunxibelelana ne-PVC ebukhali elukhuni ikhethini elithambileyo, ukuze ungarhawuli impembelelo yobuhle.
I-2, ukusetyenziswa kwekhethini ye-PVC ethambileyo kufuneka ihlambuluke ukuze kuqinisekiswe ukuba ukucoceka, ekucoceni kungasetyenziswa ngamanzi acocekileyo kunye ne-dishcloth yokucima, ukunqanda ukucwiliswa kwexesha elide emanzini, ungasebenzisi i-asidi-base yokucoca i-agent.
I-3, i-Soft Curtain Disassembly kunye nendibano ayenzi rhoqo, ukwenzela ukuba ugweme ukuphumla, okukhokelela ekufakeni akuqinanga.Musa ukusebenzisa ikhethini elithambileyo lingasuswa, sebenzisa kwindawo eyomileyo ukuze ulondoloze.
I-4, ikhethini elithambileyo le-PVC ekusetyenzisweni kweqondo lokushisa alikwazi ukuphakama, kwaye ngokungqongqo kunye neekhemikhali, umlilo okanye uqhagamshelwano lweoli ye-polymer, ukuze ungonakalisi ukusebenza kwekhethini elithambileyo, unciphise ubomi benkonzo.
Oku ngasentla kukuveliswa komkhusane othambileyo kuye wonke umntu ukwazisa ukusetyenziswa kwemicimbi yePVC yomkhusane efuna ukuhoywa, ndiyathemba ukukunceda, abavelisi basebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu wekhethini ezithambileyo, umgangatho wekhethini eveliswayo uthembekile, ixabiso lomkhusane. kusengqiqweni, luninzi lwabathengi ukwamkela kunye nokuvunywa inkcazo imveliso: compartment transparent eqhelekileyo umkhusane ethambileyo has elubala elungileyo, inokuthintela ilahleko yomoya-moya kunye zokufudumeza;inokuthintela ngokufanelekileyo ukuhlaselwa kothuli kunye nemitha ye-ultraviolet, kwaye ibuye ibe nefuthe elihle lokukhusela isandi, ukwenzela ukuba indawo yakho yokusebenza icoceke kwaye ikhululekile.
ISIPHUMO SOKUGCINA AMANDLA: Ikhethini le-PVC aliwusebenzisi umbane, akukho ngxolo, akukho manyathelo okuphucula ukusebenza kakuhle kweqhwa, ukunciphisa ixesha lokusebenza kwefriji, ukonga umbane ukuya kuma-50%.Impembelelo yokugquma isandi: I-Pvc Curtain inokunciphisa i-decibel yengxolo, ithintele ukusasazwa kwengxolo, inciphise ungcoliseko lwengxolo, yenza isikrini segumbi lomatshini, iphucule intuthuzelo yendawo yokusebenza kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso.
Impembelelo yobungqina bomoya: Isakhiwo soFakelo oluDibeneyo, ukunganyangeki kakuhle komoya, kunye nobunzima bekhethini ngokwayo, kwisantya somoya esibi sezulu, akusayi kugoba ngokugqithisileyo kwaye kuchaphazele imisebenzi eqhelekileyo.